1 Samueri 30:1-31
30 Zvino Dhavhidhi nevarume vake pavakanga vachiuya kuZikragi+ pazuva rechitatu, vaAmareki+ vakapamba kumaodzanyemba uye kuZikragi; vakaparadza Zikragi, vakaripisa nomoto,
2 vakatapa vakadzi+ navose vakanga vari mariri, kubvira kumuduku kusvikira kumukuru. Havana wavakauraya, asi vakavapamba, vakaenda.
3 Dhavhidhi paakasvika nevarume vake kuguta racho, vakaona kuti rakanga rapiswa nomoto, uye madzimai avo nevanakomana vavo nevanasikana vavo, vakanga vatapwa.
4 Dhavhidhi nevanhu vaakanga ainavo vakatanga kuchema kwazvo, vakasvimha misodzi,+ kusvikira vasisina simba rokuchema.
5 Madzimai maviri aDhavhidhi akanga atapwa, Ahinoamu+ mukadzi muJezreeri naAbhigairi+ mudzimai waNabhari muKameri.
6 Zvakatambudza Dhavhidhi kwazvo,+ nokuti vanhu vakati vaida kumutema nematombo;+ nokuti mweya yevanhu vose yakanga yashungurudzika,+ mumwe nomumwe nokuda kwevanakomana vake nevanasikana vake. Naizvozvo Dhavhidhi akazvisimbisa naJehovha Mwari wake.+
7 Nokudaro Dhavhidhi akati kumupristi Abhiyatari,+ mwanakomana waAhimereki: “Ndapota, uya neefodhi+ pedyo neni.” Abhiyatari akaunza efodhi yacho pedyo naDhavhidhi.
8 Dhavhidhi akatanga kubvunza Jehovha,+ achiti: “Nditevere boka iri revapambi here? Ndivabate here?” Iye akati kwaari:+ “Vatevere, nokuti chokwadi uchavabata, uye chokwadi uchanunura.”+
9 Pakarepo Dhavhidhi akapinda munzira, iye nevarume mazana matanhatu+ vaaiva navo, vakapfuurira kusvikira kumupata une rukova weBhesori, uye varume vaifanira kusiyiwa kumashure vakamira.
10 Asi Dhavhidhi akaramba achitevera,+ iye nevarume mazana mana, asi varume mazana maviri vakanga vaneta zvokusagona kuyambuka mupata une rukova weBhesori+ vakamira.
11 Zvino vakawana mumwe murume, muIjipiti,+ ari musango. Naizvozvo vakaenda naye kuna Dhavhidhi, vakamupa chingwa kuti adye uye vakamupa mvura kuti anwe.
12 Uyezve, vakamupa chimedu chekeke remaonde akasvinwa nemakeke maviri emazambiringa akaomeswa.+ Akadya akabva awanazve simba;+ nokuti akanga asina kudya zvokudya kana kunwa mvura kwemazuva matatu nousiku hutatu.
13 Zvino Dhavhidhi akati kwaari: “Uri waani, uye unobvepi?” iye akati: “Ndiri mushandi muIjipiti, muranda womumwe murume muAmareki, asi tenzi wangu akandisiya nokuti ndakarwara mazuva matatu apfuura.+
14 Tisu takapamba kumaodzanyemba kwevaKereti,+ uye nyika yaJudha nokumaodzanyemba kwaKarebhi;+ tikapisa Zikragi nomoto.”
15 Dhavhidhi akabva ati kwaari: “Uchanditungamirira kuboka iri revapambi here?” Iye akati: “Ndipikirei+ naMwari kuti hamuzondiurayi, uye kuti hamuzondiisi muruoko rwatenzi wangu,+ ipapo ndichakutungamirirai kuboka iri revapambi.”
16 Naizvozvo akamutungamirira,+ uye vakavaona vakapararira kwose kwose panyika pose vachidya nokunwa nokuita mutambo+ vachifarira zvakapambwa zvose zvavakanga vatora munyika yevaFiristiya nenyika yaJudha.+
17 Dhavhidhi akavarwisa kubvira pakutsvuka kwoutonga kusvikira manheru, kuti avaparadze chose; uye hapana nomumwe wavo akapona+ kunze kwemajaya mazana mana akatasva ngamera akatiza.
18 Dhavhidhi akanunura zvose zvakanga zvatorwa+ nevaAmareki, uye Dhavhidhi akanunura madzimai ake maviri.
19 Hapana chavo chavakashayiwa, kubvira kuchiduku kusvikira kuchikuru, vanakomana nevanasikana uye zvakapambwa, kunyange chinhu chero chipi zvacho chavakanga vatora.+ Dhavhidhi akadzosa zvinhu zvose.
20 Naizvozvo Dhavhidhi akatora makwai ose nemombe, zvavakatinha pamberi pezvimwe zvipfuwo zviya. Vakabva vati: “Izvi ndizvo zvakapambwa zvaDhavhidhi.”+
21 Dhavhidhi akazosvika kuvarume mazana maviri+ vakanga vaneta zvokusagona kuenda naDhavhidhi, vaya vavakanga vaita kuti varambe vakagara pedyo nomupata une rukova weBhesori; uye vakabuda kuzosangana naDhavhidhi uye kuzosangana nevanhu vaaiva navo. Dhavhidhi paakasvika pedyo nevanhu akatanga kuvabvunza kuti vakanga vakadini.
22 Zvisinei, varume vose vakaipa nevarume pasina+ pavarume vakanga vaenda naDhavhidhi vakapindura, vakaramba vachiti: “Nokuti havana kuenda nesu, hatisi kuzovapa zvakapambwa zvatanunura, kunze kwokupa mumwe nomumwe mudzimai wake nevanakomana vake, uye ngavavatungamirire vaende.”
23 Asi Dhavhidhi akati: “Musadaro, hama dzangu, nezvatapiwa naJehovha,+ pakuti atichengetedza,+ akaisa muruoko rwedu boka revapambi rakauya kuzotirwisa.+
24 Ndiani achakuteererai zvamuri kutaura izvi? Nokuti mugove weakaenda kunorwa uchafanana nomugove weakagara pedyo nomukwende.+ Vose vachava nomugove pamwe chete.”+
25 Kubvira pazuva iroro zvichienda mberi akauita murau uye zvakatongwa+ nokuda kwaIsraeri kusvikira nhasi.
26 Dhavhidhi paakasvika kuZikragi akatumira zvimwe zvakapambwa kuvarume vakuru vaJudha, shamwari dzake,+ achiti: “Hechinoi chipo+ chokuonga nokuda kwenyu chabva pane zvakapambwa zvevavengi vaJehovha.”
27 Kune vaya vaiva muBheteri,+ nevaya vaiva muRamoti+ rokumaodzanyemba, nevaya vaiva muJatiri,+
28 nevaya vaiva muAroeri, nevaya vaiva muSifmoti, nevaya vaiva muEshtemoa,+
29 nevaya vaiva muRakari, nevaya vaiva mumaguta evaJerameeri,+ nevaya vaiva mumaguta evaKeni,+
30 nevaya vaiva muHoma,+ nevaya vaiva muBhorashani,+ nevaya vaiva muAtaki,
31 nevaya vaiva muHebroni,+ nokunzvimbo dzose dzakanga dzafamba-famba Dhavhidhi, iye nevarume vake.